10 साँचो प्रेमको संकेत - PAMPEREDPEOPLENY.COM - सम्बन्ध
१० साँचो प्रेमको चिन्ह
घर सम्बन्ध प्रेम र रोमान्स प्रेम र रोमान्स oi-Denise द्वारा डेनिस ब्याप्टिस्ट | प्रकाशित: मंगलबार, सेप्टेम्बर १,, २०१ 2014, १:0:०5 [IST]
जब तपाइँ एक सम्बन्धमा हुनुहुन्छ, सधैं एक समाधान हुन्छ यदि तपाइँ तपाइँको पार्टनर संग साझा प्रेम साँचो हो वा छैन। त्यहाँ धेरै समय हुन्छ जब साझेदारहरू विभाजित हुन्छन् किनभने तिनीहरू एक अर्का बिना उत्तम छन्।
के तपाईंलाई थाहा छ त्यहाँ संकेतहरू छन् कि यदि यो साँचो प्रेम हो र यो तपाईंको लायक हो कि सम्बन्धमा आफ्नो समय र उर्जा खर्च गर्न लायक हो। यो सामान्यतया मानिन्छ कि जब दम्पतीहरू अलग छुट्टि हुन्छन्, तिनीहरू हुन्छन्।
यसको कारण विपरितहरूले आकर्षण गर्दछन्, तर सधैं होइन! तपाइँको सही प्रेम हो भनेर देखाउन संकेतहरू साझेदारहरू पढ्न गाह्रो छ। ठिक छ, त्यसैले किन बोल्ड्स्कीले तपाईंलाई देखाउनको लागि उत्तम तर केहि तरिकाहरू मार्फत मद्दत पुर्‍याएको छ यदि तपाईंको प्रेम यी संकेतहरूको केही माध्यमबाट साँचो छ भने।
दम्पतीले प्राय: बिताएको समय र संचार स्तरमा हेर्छन कि निर्धारण गर्न को लागी उनीहरूको प्रेम लामो हुन्छ। जे होस्, यो महत्त्वपूर्ण छ, यो तपाइँको प्रेम साँचो हो कि होइन भनेर बताउन को लागी एक संकेत मध्ये एक होइन।
साँचो प्रेम भनेको के हो?
वजन घटाउन को लागी फ्ल्याक्स बीउ को फाइदा
यहाँ सम्बन्धमा साँचो प्रेमका केहि संकेतहरू छन्। प्रत्येक चिन्हमा एक नजर राख्नुहोस् र फेरि सोच्नुहोस् कि तपाईंको लगानी जोखिमको लागि लायक छ कि छैन।
सम्बन्धमा साँचो प्रेमको १० चिन्ह:
साँचो प्रेमको पहिलो संकेतहरू मध्ये एक हो जब तपाइँ तिनीहरूको खुशी वा कल्याणको लागि बलिदानहरू गर्नुहुन्छ। जे होस्, यदि उनीहरूले कहिल्यै पक्का महसुस गर्दैनन् कि तपाईं उनीहरूको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ।
तपाईं हरेक सम्भावित तरिका प्रयास गर्नुहोस्
जब तपाईं आफैंमा सम्बन्ध सुधार गर्न प्रयास गर्न ठूलो लाममा जानुहुन्छ साँचो प्रेम देखाउने माध्यमहरू मध्ये एक हो। तपाईं पनि हरेक सम्भव तरिका प्रयास गर्नुहोस् कृपया महत्वपूर्ण र महत्वपूर्ण महसुस गरीएको महसुस र विशेष बनाउन।
तिनीहरूलाई चोट पुर्‍याउने बारेमा सोच्नुहोस्?
जब तपाईं त्यस विशेष व्यक्तिसँग साँच्चिकै प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईं भावनात्मक वा शारीरिक रूपमा तिनीहरूलाई चोट पुर्‍याउने कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। यो एक संकेत हो कि तपाईंको प्रेम साँचो छ।
कसरी प्राकृतिक रूपमा हाम्रो आँखा सुन्दर बनाउने
जब तपाईं आफ्नो प्रियजनलाई प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, तपाईं जेसुकै भए पनि तपाईंको वचनमा अडिग रहनुहुन्छ।
निस्सन्देह, कहिलेकाँही तपाईंलाई सम्बन्धमा ठाउँ चाहिन्छ, तर कहिलेकाँही यस्ता अवस्थाहरू हुन्छन् कि तपाईंले उनीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ जस्तो कि तपाईंले उनीहरूलाई तपाईंको जीवनको एक अंशको रूपमा हेर्नुहुन्छ। यो स the्केत हो कि यो सच्चा प्रेम हो।
सधैं एक काँधमा झुकाव
सत्य प्रेम को धेरै चिह्न मध्ये एक यो हो! तपाईको विशेष व्यक्तिले दु: ख भोगिरहेको देख्न तपाई सहन सक्नुहुन्न तपाईंको समस्याहरू के भए पनि, तपाईं सधैं काँधमा काँधमा बोल्न अघि हुनुहुन्छ।
के तपाईं गर्व महसुस गर्नुहुन्छ?
साँचो प्रेम यो हो - जब तपाईको पार्टनरले तपाईलाई असफल गर्ने केही प्राप्त गरे पछि तपाई गर्वका साथ किरण गर्नुहुन्छ।
दुःखकष्ट भोग्न तयार हुनुहुन्छ?
तपाईं कष्ट भोग्न इच्छुक हुनुहुनेछ, मात्र उनीहरूलाई खुशीको लागि। यो साँचो प्रेमको मुख्य अदृश्य संकेतहरू मध्ये एक हो, जुन आज दम्पतीहरूमा कमै कम देखिन्छ।
तपाईंको प्रेमीको जुत्तामा
के तपाई यसमा पुग्नुभयो - तपाई जे गर्नुहुन्छ वा भन्नु हुन्छ सबै, तपाईले पहिले तपाईको पार्टनरलाई दिमागमा राख्नुहुन्छ र कुनै कदम चाल्नु अघि तिनीहरूको दृष्टिकोणबाट सोच्नुहुन्छ। यदि हो भने, त्यसोभए तपाईं त्यसलाई साँचो प्रेम भन्नुहुन्छ।
के तपाइँ बदलामा केहि आशा गर्नुहुन्छ जब तपाइँ तपाइँ तपाइँको सबै आफ्नो पार्टनरलाई दिनुहुन्छ? यदि होईन भने, यो साँचो प्रेमको स्पष्ट संकेत हो।
पेरिड्स तुरून्त प्राप्त गर्ने प्राकृतिक तरिकाहरू
हातमा ट्यान हटाउने घरेलु उपचार
गर्भावस्थामा हप्ता हप्ता स्तन परिवर्तन हुन्छ
अंग्रेजीमा शिकागोमा स्वामी विवेकानंदको भाषण
राकुल प्रीत सिंह पहिलो फिल्म नाम
के हामी ज्वरोमा चामल खान सक्छौं?